Vincent Kompany oo magacaabay laacibka Kabtanka u noqon kara kooxda Manchester City – Gool FM
(Manchester) 14 Maajo 2019. Bernardo Silva ayaa noqon kara kabtanka kooxda kubadda cagta Manchester City sida uu qabo hoggaamiyaha haatan ee naadiga Vincent Kompany.
Kabtanka kooxda Man City ee Vincent Kompany ayaa saadaaliyey in xiddig iminka u ciyaara kooxda Manchester City ee Bernardo Silva uu noqon doono mustaqbalka kabtanka kooxda.
Xiddiga jabka yar ee reer Portugal ee Bernardo Silva ayuu Kompany sheegay inuu noqon doono kabtanka kooxda Manchester City ee mustaqbalka, maadaama uu leeyahay karti hoggaamiyennimo.
Taageerayaasha iyo maamulka kooxda Manchester City ayaa aad u jecel ninkaan xirfadda sare leh ee Bernardo, iyadoo dhowaan uu tababare Pep Guardiola sheegay in dadku ay ka hadlayaan xiddiga ugu fiican Premier League inuu yahay Van Dijk ama Sterling, laakiin macallinka Man City waxa uu carrabka ku dhuftay inuu jiro xiddig labadaasba ka fiican uuna yahay Bernardo Silva.
Haatan kabtanka kooxda ee Kompany waxa uu leeyahay: “Marka aan daacadda ka hadlo Bernardo Silva waxa uu leeyahay qaab hoggaamiye, 75% waa hoggaamiye, waa nin awood badan oo daacad ah, waxaana uu noqon doonaa kabtanka kooxdan.”
Xiddiga reer Belgium ee Kompany ayaana iminka sii daadaalinaya in Bernardo Silva uu kabtan u noqon doono kooxda Manchester City mustaqbalka.
Frank Lampard oo ka hadlay suurtagalnimada uu Hazard ugu biiri karo kooxda Real Madrid